Xawaaraha iyo isbarbar dhigga waxqabadka ee udhaxeeya iOS 10.1 vs iOS 10.0.2 vs iOS 9.3.5 | Wararka IPhone
Mar kasta oo Apple ay soo saarto nooc cusub oo iOS ah, isticmaaleyaal badan ayaa isweydiinaya haddii ay runti mudan tahay in la cusbooneysiiyo qalabkooda nooca ugu dambeeya ee iOS. Laakiin shakiga ayaa ka weyn marka isbeddelka uu ku lug leeyahay beddelka nooca iOS. IOS 10 waxay ka tagtay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iOS ee jiilka 4aad ee iPhone 2s, iPad 3 iyo 5, iPad Mini iyo iPod taabashada, sidaas darteed waa la jaan qaadi karaa iPhone 5, halkaas oo ay si aad u wanaagsan ugu shaqeyso habka, wax la yaab leh oo ah qaabka ugu da'da weyn iPhone ee la jaan qaadaya qaabkan.
Toddobaadkii la soo dhaafay Apple wuxuu sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS 10.1 kaas oo siiya isticmaaleyaasha qaabka sawir qaadista ee iPhone 7 Plus kaas oo u oggolaanaya in lagu jahwareeriyo asalka sawirada si loo abuuro natiijooyin cajiib ah. Laakiin sidoo kale way ina keentay horumarintii ugu weyneyd ee xagga amniga iyo xirnaanshaha nuglaanta u oggolaatay koodhka xun ee lagu dhex gelinayo iPhone-ka Iyada oo loo marayo hantida JPEG, xalalka lagama maarmaanka u ah iyo si fudud iyaga dartiis waxaa lagugula talinayaa inaad cusbooneysiiso nooca ugu dambeeya ee iOS.
Inbadan waxay ahaayeen aqristayaasha aan hubin bal inay cusbooneysiiyaan boosteejooyinkooda qaabkan ugu dambeeyay Ama sug cusbooneysiin kale si waxqabadka iOS 10 uu ugu fiicnaado. Marwalba waan taageersanahay in laga hormariyo amniga waxqabadka, ilaa iyo inta terminalkeygu uusan noqonin aalad ka faa'iido badan miisaanka waraaqaha marka loo eego taleefoonka casriga ah. Laga bilaabo saldhigga, in iPhone 5 uu si fiican u shaqeynayo wax kasta oo adag, waxaan kugula talin lahaa dhammaan kuwa shaki ka qabo inay cusbooneysiiyaan haa ama haa, illaa iyo inta aysan ahayn kuwa isticmaala JAILBREAK.
Laakiin dhammaan kuwa weli shakiga qaba, hoosta waxaan ku tusi doonaa dhowr fiidiyow oo ah meeshii aad karto fiiri waxqabadka dhammaan boosteejooyinka la jaan qaadaya macruufka 10 inta u dhexeysa nooca ugu dambeeya ee iOS 9, Cusboonaysiinta ugu horreysa ee iOS 10 (10.2) iyo tan ugu dambeysa (10.1).
1 Waxqabadka iyo isbarbar dhigga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5
2 Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5s
3 Waxqabadka iyo isbarbar dhigga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6
4 Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6s
5 Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 9.3.5 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5s
6 Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 9.3.5 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6s
Waxqabadka iyo isbarbar dhigga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5
Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5s
Waxqabadka iyo isbarbar dhigga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6
Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 10.0.2 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6s
Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 9.3.5 iyo iOS 10.1 ee iPhone 5s
Waxqabadka iyo isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 9.3.5 iyo iOS 10.1 ee iPhone 6s
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Isbarbardhigga xawaaraha iyo waxqabadka u dhexeeya macruufka 10.1 vs iOS 10.0.2 vs iOS 9.3.5
LockBrowser wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo dhex marno shaashadda qufulka (Cydia)